IYunivesithi yaseMarquette: UMTHETHO WESIKOLO, Imilinganiselo yokwamkeleka, ngakumbi
Iimviwo zeYunivesiti yaseMarquette
IYunivesithi yaseMarquette inezinga lokumkela malunga neepesenti ezingama-84, okwenza ivule ngokubanzi; avumile ukuba abafundi banamabanga kwaye amanqaku ovavanyo olulinganisiweyo aphezulu okanye ngaphezulu. Ngokuhambisana nesicelo esizalisiweyo (uMarquette uyayifumana isicelo esifanelekileyo), abafundi abaza ku funeka bahambise amanqaku avela kwi-SAT okanye UMTHETHO, imibhalo ephakamileyo yesikolo, ukuqhubeka kwakhona, ileta yesincophiso kunye nesicatshulwa.
Imali yokwamkela iNyuvesi yaseMarquette: 84%
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT umzobo weMarquette
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 520/630
ISAT Math: 520/640
UMTHETHO WOMTHETHO: 24/29
UMTHETHO IsiNgesi: 24/30
UMTHETHO UMathe: 24/28
IYunivesithi yaseMarquette, e-Milwaukee, eWisconsin, iyimfihlo, i-Jesuit, iYunivesithi yamaRoma Katolika. Iyunivesiti ibonakala kakuhle kwiiyunivesithi zesizwe, kwaye iinkqubo zayo kwishishini, ngonesi, kunye nezobugcisa bezinto eziphilayo zifanelekile. Abafundi bevela phantse kuwo onke amazwe kunye namazwe angama-68, kwaye ngaphezu kweyesithathu kwisigidi sabafundi babekho kwipesenti ezili-10 zeklasi zabo eziphakamileyo. Ngenxa yamandla alo kwezobugcisa kunye neenzululwazi, uMarquette wanikwa isahluko sePhi Beta Kappa .
Abafundi banokukhetha ukusuka kuma-116 ama-majors kunye nabancinane abangama-65. Izifundo ziyaxhaswa ngumlinganiselo we-14 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty. Ngaphambili kwezemidlalo, iMarquette Golden Eagles incintisana kwiCandelo le-NCAA I- Conference East enkulu . Iimidlalo ezidumile ziquka ibhola lebhola, ibhaskball, umkhondo kunye nensimu, i-lacrosse, negalufa.
Ubhaliso lwabonke: 11,294 (8,238 abafundele iidanga)
Imfundo kunye neMali: $ 38,470
Iincwadi: $ 1,008 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 11,440
Ezinye iindleko: $ 2,567
Iindleko ezipheleleyo: $ 53,485
Uncedo lwezeMali kwiYunivesithi yaseMarquette (2015 - 16)
Izibonelelo: $ 17,935
Imali: $ 9,116
I-Popular Majors: I- Accounting, i-Biomedical Sciences, iCriminology, i-Marketing, Nursing, Psychology
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 89%
Ezemidlalo zaMadoda: Umkhondo kunye neNkundla, iLacrosse, iNgcahla, ilizwe eliphambeneyo, iBhola lebhola, iGalofu, iTennis
Ezemidlalo zaBasetyhini: Ibhola lebhola, iBhola lebhola, iVolleyball, iLizwe eliphambeneyo, iLasrosse, iTennis, iTrans and Field
IMarquette kunye nesicelo esiqhelekileyo
IYunivesithi yaseMarquette isebenzisa isicelo esiqhelekileyo .
IYunivesithi yaseMississippi Admissions
I-Alderson Broaddus yeYunivesiti yokuVunywa
IYunivesithi yaseRochester Admissions
IYunivesithi yaseTexas e-San Antonio (UTSA)
I-Barry University Admissions
I-University of South Alabama Admissions
IYunivesithi yePurus (Main Campus) I-Admissions
CSUN GPA, SAT, kunye ne-ACT Data
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: -sissis
Biography kaFrancisco Madero
Ngubani owayengumlawuli waseRoma uAntoninus Pius?
Iingcebiso ezi-6 zokufunda ngakumbi kwixesha elifutshane
Ukulingana noxinzelelo lwangaphakathi lwentloko ngelixa iScuba Diving
Iingcingo ezinkulu kwilizwe lomculo
Iilwimi zesiTaliyane kubaQaleli
Ngaba I-Microevolution Ingakwazi Ukukhokelela Ekuguquleleni Kwemvelo?
Impendulo eyahlukeneyo e-Alice Walker's Essay 'Ngaba ndiBlue?'
Imbali kunye neNcazelo yoMhlengikazi weManzi
10 Amanqaku Nge-Battle of Alamo
"Va, Pensiero" Iingoma kunye neNguqulelo Yombhalo
Iholide yeSithombe se-One-Handed Grikhand Grips
Kubalulekile uWillie Nelson
Amacandelo asebenzayo ekunyuseni ukubandakanywa kwabazali kwiMfundo
UMalcolm Gladwell "I-Point Point"
I-Concept of Time kwiHindu